खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई घर पठाइन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानैपर्ने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । ‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो
सरकारी विद्यालयको नीजिको हाराहारीमा : मेयर थापा
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौंँ । कागेश्वरी मनोहरा नगरापलिकाका मेयर कृष्णहरी थापाले आफ्नो नगर क्षेत्रका सरकारी विद्यालयलाई नीजी विद्यालयको हाराहारीमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नगरापालिकाको काँडाघारीस्थीत अक्षरा स्कूलको सातौँ स्थापना दिवस तथा भूकम्प प्रतिरोधी भवनको उद्घाटन गर्दे मेयर थापाले
विमान दुर्घटनाका मृतकप्रति दुःख व्यक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा युएस बंगलाको विमान दुर्घटनालाई नेपाल सरकारले दुःखद र गम्भीर घटनाका रुपमा लिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अकल्पनीय
गोपाल पराजुलीले दिए प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा
काठमाडौँ । गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायधीस पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले विहिबार अपराह्न शीतल निवास गएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पदबाट अलग भएको पत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षित अवतरणको बाटो रोज्न दिएको सुझावपछि उनले राजीनामा बुझाएको राष्ट्रपति कार्यलय स्रोतल
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीबाट पदभार ग्रहण
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आज पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले पदबहालीलगत्तै इजलास तोकी काम समेत शुरु गरेका छन् । न्यायपरिषदले बुधबारको सचिवस्तरीय पत्रमार्फत प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको २०७४ साउन २१ गते ६५ वर्ष पुगेको
‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायधीशबाट राष्ट्रपतिले लिइन् सपथ
काठमाडौं । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकी छन् । राष्ट्रपतिले सपथ लिनुअघि प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको पत्र न्यायपरिषद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । न्यायपरिषदले पदमुक्त गरेकै व्यक्तिबाट राष्ट्रपतिले
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गणेश तिम्सिना निर्वाचित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा एमाले सांसद गणेश तिम्सिना निर्वाचित भएका छन् । उनलाई बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले औपचारिक रूपमा सभाको अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको लागि गत सोमबार निर्धारित समयभित्र वाम गठबन्धन तिम्सिनाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी
कोरियन भाषा परीक्षा जेठ २६ र २७ मा
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान लिइने ईपीएस परीक्षा आगामी जेठ २६ र २७ गते काठमाडौं र पोखरामा हुने भएको छ । भाषा परीक्षाको लागि फर्म भर्न चैत ८ देखि १७ गतेसम्म १० दिनको समय राखिएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । मानव संशाधन विकास कार्यालय (एचआरडी) कोरियाका अनुसार परीक्षाको नतिजा आगामी असार
भौतिकशास्त्री स्टिफन हकिङ्गको निधन
काठमाडौँ । चर्चित भौतिकशास्त्री स्टीफन हकिङ्गको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको परिवारले बुधबार बिहान वक्तव्य जारी गर्दै हकिङ्गको क्याम्ब्रिजमा रहेको उनको निवासमा निधन भएको जानकारी दिएको हो । हकिङ्गका सन्तान लुसी, रोबर्ट र टिमले वक्तव्यमा भनेका छन् – हाम्रो प्रिय पिताको निधनमा हामी दुःखी छौँ
विद्या भण्डारी दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित
काठमाडौं- राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी पुन निर्वाचित भएकी छन्। आज भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भण्डारीले ३९ हजार २ सय ७५ मतभार प्राप्त गरिन्। भण्डारीकी प्रतिस्पर्धी कुमारीलक्ष्मी राईले ११ हजार ७ सय ३० मतभार प्राप्त गरिन्। ८ सय ८० मत मध्ये ८ सय ६२ मत खसेको थियो। मंगलबार बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको राष्ट्रपतिको
युएस–बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा वरिष्ठ न्युरो सर्जन बालकृष्ण थापाको निधन भएको छ। डा थापा भरतपुरको चौबिसकोठीमा रहेको चितवन अस्पताल प्रालि तथा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत थिए। बंगलादेशमा भएको चिकित्सासम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिएर नेपाल फर्कने क्रममा उनको विमान दुर्घटनामा
मृतकको सङ्ख्या ४९ पुग्यो, घाइते २१
काठमाडौं, २८ फागुन । सोमबार दिसँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस बंगला विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुगेको छ । त्यसमा १७ जना नेपाली रहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । विमानमा ३३ जना, नेपाली ३३ जना बङगाली, १ चिनियाँ र बाँकी ५ जनाको मुलुक खुलेको छैन् । दुर्घटनास्थलमा
बङ्गा विमान दुर्घटनामा ४० जनाको मृत्यु, १४ नेपाली
काठमाडौं । बङ्गादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौंका लागि उडेको यूस बङ्गलाको जहाज त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्गमा दुर्घटना हुँदा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा १४ जना नेपाली रहेको नागरिक उड्यन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २७ जना विरामीको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ भने
एयर बङ्गलाको विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना,विमानमा आगलागी,७ जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइयो
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा एयर यूस बङ्लाको विमान रनवेबाट बाहिर गएर दुर्घटना भएको छ । ढाकाबाट आएको ड्यास–८ विमान दिउँसो २ बजेर २० मिनेट जाँदा अवतरणको क्रममा रनवे बाहिर पुगेर दुर्घटना भएको र घटनाको क्षतिबारे थप विवरण आइसकेको छैन । विमानमा ६७ जना यात्रु र ४ जना चालक
हुुम्लामा १ वर्षमा ५ सिडियो !
फागुन २८, हुम्ला । दाने बोहरा ६ नं प्रदेशको विकट जिल्ला हुम्लामा १ वर्षको अवधिमा ५ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । जिल्लाको सुशासन देखि शान्ति सुरक्षा सम्मको जिम्मेवारी पाएका अधिकारी २ महिनापनि बस्न नपाई सरुवा गर्ने गरिएको
राष्ट्रपति निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै रङका मतपत्र
काठमाडौँ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै रङका मतपत्र प्रयोग गरिने भएको छ । निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यले हरियो र प्रदेशसभाका सदस्यले रातो रङको मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने भएको छ । फागुन २९ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइ गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा
प्रधानमन्त्री ओलीलाई झण्डै तीन चौथाइ सांसदको मत,पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा संसदबाट झन्डै तीन चौथाइ मत प्राप्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावको पक्षमा २०८ मत र विपक्षमा ६० मत परेको छ । ओलीको पक्षमा एमालेसहित माओवादी केन्द्र,
कानून निर्माणमा लाग्ने नवनिर्वाचित सभामुख महराको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ र । नवनिर्वाचित सभामुख कृष्णबहादुर महराले जनताले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर आफूले जिम्मेवारी बहन गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले महरा सभामुखमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणापछि पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले संविधान कार्यान्वयनका
केन्द्रीय संसद्को सभामुखमा महरा !
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा कृष्णबहादुर महराले उम्मेदवारी दिएका छन् । महराको प्रस्तावकमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ छन् भने समर्थकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेताहरु उपस्थित थिए । पार्टी अध्यक्ष
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । भारत सरकारले भूकम्प प्रभावित गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार घर पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । नेपाली भाषाका वरिष्ठ साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको निधन भएको छ । राईको दार्जिलिङको लोचनगरस्थित निवासमा मंगलबार साँझ साढे ६ बजे ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको दार्जिलिङका कवि मोहन ठकुरीले जानकारी दिए । साहित्यकार राईको जन्म १९८४ सालमा दार्जिलिङमा भएको थियो । उनी नेपाली
डा.केसीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले डाक्टर केसीलाई स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । आफू संलग्न भएको विवाद सम्बन्धी
फोरम सरकारमा जाने निर्णय,कति मन्त्रालय पाउने टुङ्गो छैन
काठमाडौं । स‌ंघीय समाजवादी फोरम नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको फोरमको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, कति मन्त्री पाउने भन्नेबारे टुङ्गो लागि नसकेको फोरमको दाबी छ । यसबारे छिटै सहमति हुनेमा हस्ताक्षर हुने तयारी भएको छ । फोरमले प्रतिनिधि सभामा
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य पुनः सुरु
काठमाडौँ । रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको छ । गएरातीबाट काम सुरु भएको हो । समयमै तलब नदिएको भन्दै कामदार आन्दोलित बनेपछि ६ दिनसम्म निर्माण कार्य रोकिएको थियो । तीन महिनादेखि काम बापतको भुक्तानी र संचय कोषको रकम नपाएको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नेपाली
राष्ट्रियसभाका ४ सदस्य सपथ खान छुटे
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका ५५ जना सदस्यले आइतवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको राष्ट्रियसभा कक्षमा आज साँझ आयोजित एक कार्यक्रममा ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले उनिहरुलाई शपथ दिलाएकि हुन् । केही सांसदले आ–आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएका थिए । शपथ कार्यक्रममा
प्रदेश नं ४ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा घिमिरे सिफारिस
पोखरा । प्रदेश नं ४ को आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १६० बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय
‘विश्वमै शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र रूससँग’
मस्को । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसले आफ्नो देशसँग विश्वकै शक्तिशाली क्रुज क्षेप्यास्त्र भएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा गरेको वार्षिक सम्बोधनका क्रममा पुटिनले उक्त क्षेप्यास्त्रले संसारको कुनै पनि स्थानका प्रहार गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । राजधानी मस्कोमा बोल्दै पुटिनले यो रूसको
गृहमन्त्रीले गरे प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण नयाँ कार्यशैली अपनाउन निर्देशन
काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पदभार ग्रहणपछि पहिलो पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दै नयाँ कार्यशैलीका साथ शान्ति सुरक्षाका कामकारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए । सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अपराध अनुसन्धानमा दक्षता र शान्ति सुरक्षाको
सिटीईभीटीमा नेविसंघको समानान्तर समिति
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटीमा) नेपाल विद्यार्थी संघको समानान्तर समिति गठन गरिएको छ । संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट विद्यार्थीहरुले नेविसंघ केन्द्रीय अध्यक्षले गठन गरेको समितिसँग समानान्तर हुने गरि अर्को समिति गठन गरेका हुन् । संस्थापन
सिरियामा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा दिप प्रज्वलन
काठमाडौँ । सिरियामा अमेरिकी वम आक्रमणको विश्वभर विरोध गरिएको छ । सिरियामा ज्यान गुमाएका मृतक, घाइतेको सम्झनामा शोक र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ । बालबालिका समेत गरेर हजारौंको ज्यान गएको छ । बालबालिकामाथि आक्रमणको नेपालमा पनि बालअभियन्ता, नागरिक समाजले निन्दा गरेका छन् । शान्ती स्थापनाको कामना